ထိပ်တန်း ppsspp ဂိမ်းများကိုမော်ကွန်း -
အမျိုးအစား: ထိပ်တန်း ppsspp ဂိမ်း
Tekken Download6အန်းဒရွိုက် PSP သည် apk [ISO ကို + CSO]
လှုပ်ရှားမှု, Arcade, လူကြိုက်များသော Apps ကပ, PSP iso, ထိပ်တန်း ppsspp ဂိမ်း
TEKKEN6PSP ၏ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အရှိဆုံးဖွယ်ရှိမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရှိဆုံးအောင်မြင်စွာ-လူသိများနှင့်စှဲအားကစားထက်ပိုမိုနှင့်အတူ 100% Android အတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဂိမ်း . Tekken6အန်းဒရွိုက် Apk (.အုပျစုမြား) rom ယခု android များအတွက်ပြ သ. ရ. ဒါကြောင့်ဒီအားကစားဝယ်ယူရန်အဘယ်သူမျှမပျောက်ဆုံးနှင့်အတူဆော့ကစား . Tekken6တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်…
NBA 2K13 PSP iso + CSO အခမဲ့ Android ကို Download လုပ်ပါ [ယူအက်စ်အေ] ဂိမ်းရော
2018 TOP PSP ဂိမ်းများ, လှုပ်ရှားမှု, လူကြိုက်များသော Apps ကပ, ထိပ်တန်း ppsspp ဂိမ်း
NBA 2K13 2K အားကစားလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ရပ်များလုပ်ရပ်တွေကိုမြင်အကြံပြုချက်များအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ပုံနှိပ်တစ်ဘတ်စကက်ဘော On-line ကိုအပန်းဖြေဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအောက်တိုဘာလအပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 2, 2012 Xbox ဂိမ်းစက်များအတွက်မြောက်အမေရိက 360, PlayStation Moveable, PlayStation သုံး, Microsoft ကအိမ်မှာပြတင်းပေါက်နေသောခိုလှုံရာအနဲ့ Wii. အဆိုပါများအတွက်တစ်ဦးကဗားရှင်း…
ဘင် 10 ကမ္ဘာမြေကို Android PSP iso + CSO အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဒကာကွယ်ပေးသူ (ဂိမ်း)
အခမဲ့ download, လူကြိုက်များသော Apps ကပ, PSP iso, ထိပ်တန်း ppsspp ဂိမ်း
ဘင် 10: ကမ္ဘာမြေ၏ကာကွယ်ပေးသူအမေရိကန်ကာတွန်းရုပ်သံ sequence ကိုဘင်အပေါ်လုံးဝကိုအခြေခံပြီးတစ်ဦးအပေါ်-line ကိုအပန်းဖြေဖြစ်ပါသည် 10. ဒါကအရေးကြီးဆုံးဘင်ဖြစ်ပါသည် 10 အပန်းဖြေကြောင့် PSP များအတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်, PS2, OctoberNovember အတွက်ကို Nintendo DS နှင့်ကို Nintendo Wii 2007. ပထမဦးစွာအားကစား၏, …
DOWNLOAD WIPEOUT Pulse PSP က ISO compression GAME [PPSSPP / PSP]
လူကြိုက်များသော Apps ကပ, PSP iso, ထိပ်တန်း ppsspp ဂိမ်း
Wipeout Pulse တစ်ပြိုင်ကားအပန်းဖြေဖြစ်ပါသည်, ဆိုနီမှအသစ် PlayStation Moveable များအတွက် SCE စတူဒီယိုလီဗာပူးလ်အသင်းကတီထွင်, သန့်စင်သော Wipeout မှနောက်ဆက်တွဲ. အဆိုပါအားကစားတရားဝင်ပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 27 မတ်လ 2007 နှင့်ပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 14 ဒီဇင်ဘာလ 2007 ဥရောပမှာ. တစ်ဦးက PlayStation2ဆိပ်ကမ်းကိုပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 24 ဇွန်လ 2009…
ဧရာမခိုးမှုကြီး (GTA) ဒုစီးတီးပုံပြင်များဂိမ်း PSP က ISO အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် (cheat နှင့်အတူ)
Grand Theft Auto Download (GTA): အားကစားအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည် Rockstar မြောက်ကိုရီးယားအတူ Rockstar လိဒ်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် Rockstar ဗီဒီယိုဂိမ်းအားဖြင့်ပုံနှိပ်အိတ်ဖွင့်ကမ္ဘာကြီးအရေးယူ-စွန့်စားမှု PSP အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်ဒု Metropolis ပုံပြင်များ. ဒု Metropolis ပုံပြင်များဟာ Grand Theft Auto sequence.The core ကိုကနေလုံးဝလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောထုတ်မှအညီအမျှပုံဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်…
Daxter PSP iso + CSO ဂိမ်းရော Highly Compressed Download
လှုပ်ရှားမှု, လူကြိုက်များသော Apps ကပ, PSP, ထိပ်တန်း ppsspp ဂိမ်း
Daxter မိုဃ်းလင်းမှာပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတစ် platform ပေါ်တွင်-line ကိုအပန်းဖြေဖြစ်ပါသည်. ဂိမ်းရဲ့ jak နှင့် Daxter sequence ကိုတစ်စိတျအပိုငျး, Daxter အားလုံး jak နှင့် Daxter အကြားနှစ်နှစ်အချိန်-span အားဖြင့်ရာအရပ်ကိုကြာ: ရှေ့ပြေးအမွေအနှစ်နှင့် jak II ကို. ဒါဟာသူ့ရဲ့ဇာတ်ကောင် Daxter သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးပလက်ဖောင်းအားကစားင်, တစ်ဦး…
WWE Smackdown ရော် vs Download 2011 PSP (iso + CSO) လိုက်ဖက်တဲ့ဂိမ်း
လူကြိုက်များသော Apps ကပ, ထိပ်တန်း ppsspp ဂိမ်း
WWE SmackDown vs. ကုန်ကြမ်း 2011 (ထို့ပြင် WWE SvR ဖို့ကိုတိုစေ 2011 သို့မဟုတ် “SVR 11″) ပညာတတ်ပန်း On-line ကိုအားကစား Yuke ရဲ့အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် PlayStation Moveable များအတွက် THQ တို့ကပုံနှိပ်ဖြစ်ပါသည် (PSP). ဒါဟာ WWE SmackDown vs တွင်ပါရှိသောသတ္တမအပန်းဖြေင်. ကုန်ကြမ်း sequence ကိုနှင့်အဆုံးစွန်ထားသောစာပိုဒ်တိုများအပန်းဖြေ…
နတ်ဆိုးများက Android Apk ၏ Toukiden အဆိုပါခေတ် Download (PSP + PPSSPP) က ISO + CSO ဂိမ်း
2018 TOP PSP ဂိမ်းများ, ppsspp, ထိပ်တန်း ppsspp ဂိမ်း
Toukiden: နတ်ဆိုးများ၏ခေတ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် 2013 အဆိုပါ PlayStation သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် PlayStation Vita အဘို့အိုမီဂါ Drive ကိုအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးရွေ့လျားမှုအခန်းကဏ္ဍ-ကစားအပန်းဖြေ. ဒါဟာဇွန်လရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 27, 2013 ဂျပန်မှာ. Tecmo Koei E3 မှာအားကစား၏ PlayStation Vita ဗားရှင်းမိတ်ဆက်ပြသ 2013, နှင့်အားကစားဖွင့်လှစ်…
အဆိုပါ 3rd မွေးနေ့က Android Apk CSO + က ISO ဂိမ်းအခမဲ့ Download [PPSSPP + PSP]
လှုပ်ရှားမှု, ppsspp, ထိပ်တန်း ppsspp ဂိမ်း
တတိယမွေးနေ့စတုရန်းမိုင်ကပူးတွဲတီထွင်တဲ့ Third-လူတစ်အခန်းကဏ္ဍ-ကစားသေနတ်သမားဖြစ်ပါသည်. Enix နှင့် HexaDrive, နှင့်စတုရန်းအားဖြင့်ပုံနှိပ်. အဆိုပါ PlayStation Moveable များအတွက် Enix. ဒါဟာအတွင်းဖြန့်ချိခဲ့သည် 2010 ဂျပန်နှင့် 2011 မြောက်အမေရိကနှင့်ဥရောပတွင်. အဆိုပါအားကစားတစ်ခုချင်းစီကိုကပ်ပါးပိုးတွင်ပါရှိသောတတိယ entry ကိုဖြစ်ပါတယ်…
Dissidia Final Fantasy PSP iso + CSO က Android Download [eng] PPSSPP ဂိမ်း
Dissidia 012 ကျန်ရှိသော Fantasy တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် 2011 စတုရန်းအားဖြင့်ပုံနှိပ်တိုက်ဖျက်ရေးအားကစား. လက်ကျန် Fantasy sequence ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် PlayStation ပို့ဆောင်ရေးများအတွက် Enix. ဒါဟာကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ 1st ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲကတီထွင်ခြင်းနှင့်မတ်လသုံးရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်, 2011. အဆိုပါအားကစားတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦး prequel ဖြစ်ပါသည်…
ဘုရားသခင့စားချင်သောသူ၏ပ2APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
2018 TOP PSP ဂိမ်းများ, လူကြိုက်များသော Apps ကပ, ppsspp, ထိပ်တန်း ppsspp ဂိမ်း
နောက်ဆုံးရဗားရှင်းဘုရားသခငျသညျစားချင်သောသူ၏ပ Download2APK ကိုဘုရားသခငျသညျစားချင်သောသူ၏ပ File2APK ကိုဒေါင်းလုပ်: PSP Goddo ITA 2?) နိုဝင်ဘာလအပေါ် Shift နဲ့ Namco Bandai ဗီဒီယိုဂိမ်းအားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး PSP iso On-line ကိုအပန်းဖြေ 14, 2013 ဂျပန်နှင့်ဘုရားစားချင်သောသူ၏ပဘက်စတစ်နောက်ဆက်တွဲ. ဒါဟာမော်ဒယ်လွှမ်းခြုံ…
ဧရာမခိုးမှုကြီး (GTA) ဒုစီးတီး APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Grand Theft Auto ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ် (GTA) ဒုစီးတီး APK ကို Grand Theft Auto file (GTA) ဒုစီးတီး APK ကိုဒေါင်းလုပ်: PSP အပန်းဖြေ Rockstar မြောက်ကိုရီးယားနှင့်အတူ Rockstar လိဒ်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးပွင့်လင်းကမ္ဘာကြီးအရေးယူ-စွန့်စားမှု PSP အပန်းဖြေသည်နှင့် Rockstar ဗီဒီယိုဂိမ်းအားဖြင့်ထင်ရှားဒု Metropolis ပုံပြင်များ. ဒု Metropolis ပုံပြင်များ…
Monster Hunter အိတ်ဆောင် 3rd APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
2018 TOP PSP ဂိမ်းများ, လူကြိုက်များသော Apps ကပ, ppsspp, PSP iso, ထိပ်တန်း ppsspp ဂိမ်း
Monster Hunter အိတ်ဆောင် 3RDAPK ဖိုင် Monster Hunter APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်:ဒေါင်းလုပ် & Monster Hunter Moveable တတိယ PSP ကို ​​Android အားကစား Play. Monster Hunter Moveable တတိယ, ဒီဇင်ဘာလ 1 ရက်နေ့တွင်ဂျပန်နိုင်ငံ၌ဖြန့်ချိခဲ့သည့် PlayStation Moveable စနစ်အများအတွက် Monster Hunter ဂိမ်းအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောတစ်အပန်းဖြေဖြစ်ပါသည်…
ပါရှားအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဒမင်းသား Play | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
ပါရှား APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဒ Persia APK ဖိုင် Play ကိုမင်းသား၏ Play ကိုမင်းသား၏ DOWNLOAD larest ဗားရှင်း: ပါရှားမင်းသားဖြစ်ကောင်းနှင့်အတူ PSP ၏အရှိဆုံးလူသိများနှင့်စွဲလမ်းအပန်းဖြေဖြစ်ပါသည် 100% ရိုးရှင်းက Android ဂိမ်း. ပါရှားမင်းသား: Android App များ Apk (.အုပျစုမြား) ရောမမြို့သည်ယခုအခါများအတွက်ရရှိနိုင်…
Transformers အဆိုပါဂိမ်းကို PSP က ISO ကို Android အပြည့်အဝဂိမ်း Download
2018 TOP PSP ဂိမ်းများ, လှုပ်ရှားမှု, Arcade, လူကြိုက်များသော Apps ကပ, ppsspp, ထိပ်တန်း ppsspp ဂိမ်း
Transformers အဆိုပါအားကစား၏အပြည့်အဝမော်ဒယ် Play က Android မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များအတွက် PSP iso Download. Transformers အဆိုပါအားကစားအဓိကအပေါ်လုံးဝကိုအခြေခံပြီးတစ်ဦးအပေါ်လိုင်းအားကစား၏အတော်လေးအနည်းငယ်ကွာခြားမှုများအစုတက်ဖြစ် 2007 ရွေ့လျားမှုရုပ်ရှင် Transformers ကိုင်, အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သမျှသောအရာ၏…
Sparta iso ကို Android Compressed ၏စစ်ပွဲ၏ဘုရားသခငျသညျဝိညာဉျတျော (PSP + PPSSPP) ရွမ်
2018 TOP PSP ဂိမ်းများ, လှုပ်ရှားမှု, Arcade, လူကြိုက်များသော Apps ကပ, PSP iso, ထိပ်တန်း ppsspp ဂိမ်း
တိုက်ပွဲ၏ဘုရားသခငျသညျ Download: Sparta PSP iso ကို Android Apk အားကစား၏တစ္ဆေ. တိုက်ပွဲ၏ဘုရားသခငျသညျ: Sparta ၏ဝိညာဉ်တော်မိုဃ်းလင်းနှင့်စန်တာမော်နီကာစတူဒီယိုမှာပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတစ် 3rd တိကျတဲ့အထူးသဖြင့်လူတစ်ဦးအရေးယူ-စွန့်စားမှုအပေါ်-line ကိုအပန်းဖြေဖြစ်ပါသည်, နှင့် Sony Laptop ကိုကွန်ပျူတာ PC အပန်းဖြေခြင်းဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသ (SCE). ဒါဟာပထမဦးဆုံးခဲ့…